शेरलॉक होम्स पुस्तकहरू, डोएलको बारेमा र कुन क्रमहरूमा कामहरू पढ्नुहोस् वर्तमान साहित्य
आर्थर कानन डोयल उद्धरण।
जब एक इन्टरनेट प्रयोगकर्ता स्क्रीन मा "शर्लक होम्स किताबहरु" अनुरोध गर्दछ, (शायद) सबै समय को प्रख्यात पुलिस अन्वेषक को कथाहरु देखा पर्दछ। उनीसँगै - एडगर एलन पोको डुपिन र अगाथा क्रिस्टीको पाइरोट - जासूस विधाको "संस्थापक" पात्रहरू मध्ये एक हो। त्यसबाहेक, उनको नामको महत्त्व साहित्यिक क्षेत्र भन्दा पर जान्छ।
वास्तवमा, यो लोकप्रिय संस्कृति आइकन प्रसिद्ध सर आर्थर कोनन डोयल द्वारा बनाईएको अडियोभिजुअल कला मा एक अपरिहार्य संदर्भ हो। अचम्म मान्नुपर्दैन, यसले फिचर फिल्म र टेलिभिजन श्रृंखला बीच between० भन्दा बढी शीर्षक प्रेरित गरेको छ। यस खण्डमा, विश्व प्रसिद्ध कलाकारहरूको प्रदर्शन (आर। डोन्ने जुनियर वा जेरेमी ब्रेट, उदाहरणका लागि) होम्सलाई विश्वव्यापी व्यक्तित्व बनाउछ।
1 लेखकको बारेमा, सर आर्थर कोनन डोयल
1.1 जन्म, परिवार र पहिलो अध्ययन
1.2 उच्च शिक्षा
1.2.1 पहिलो कथाहरू
1.3 अक्षरमा संक्रमण
2 डोयलको शेरलॉक होम्ससँग प्रेम-घृणाको सम्बन्ध
3 होल्मेसियन क्यानन
4 शर्लक होम्स जीवनी
4.1 व्यक्तित्व लक्षण
4.2 अन्य पात्रहरू र केहि जिज्ञासुहरू
4.2.1 असाधारण बौद्धिक क्षमताको एक nemesis
4.3 जासूसको जीवनी अनुसार होल्मेसियन क्याननको अर्डर पढ्ने
लेखकको बारेमा, सर आर्थर कोनन डोयल
जन्म, परिवार र पहिलो अध्ययन
कलाकारहरूको छोरा चार्ल्स ए डोयल र मेरी फोली, आर्थर इग्नाटियस कोनन डोयल उहाँ मे २२, १ 22। मा स्कटल्याण्डको एडिनबर्गमा जन्मनुभएको थियो। उनी एक धनी, रूढीवादी विचारधारा क्याथोलिक परिवारको रेखदेखमा हुर्केका थिए। तसर्थ, जवान आर्थर इ England्ल्यान्डको जेसुइट स्कूलहरू (प्राथमिक र माध्यमिकको अंश) र अस्ट्रिया (उच्च विद्यालय) मा भर्ना भए।
१ 1876 मा, डोएलले आफ्नो मेडिकल अध्ययन शुरू गरे एडिनबर्ग विश्वविद्यालयमा। त्यहाँ आफ्नो योग्यता र बाहिर उभिए बिभिन्न खेलहरूमा (बक्सि,, रग्बी, क्रिकेट गोल्फ) ... त्यस्तै गरी, अध्ययनको त्यो घरमा उनी प्रख्यात फोरेंसिक डाक्टर जोसेफ बेलको चेला बने, जसले आफ्नो अर्धात्मक प्रक्रियाहरूको सटीकताका साथ युवा आर्थरलाई प्रभावित गरे।
बेलको चरित्रको निर्माणमा महत्वपूर्ण प्रभाव थियो जसले डोइललाई साहित्यिक प्रसिद्धि प्रदान गर्‍यो: शेरलॉक होम्स। बराबरी, Sasassa उपत्यका को रहस्य (१1879)) शर्ट कहानी प्रकाशित गरियो चेम्बरहरूको एडिनबर्ग जर्नो उनले आफ्नो पहिलो प्रदर्शन गरे। अर्को वर्ष उनले व्हेलरमा सवार सर्जनको रूपमा आफ्नो प्रशिक्षण पूरा गरे आशा, आर्कटिकमा।
पछि, उनले एस एस मयम्बामा चढे जुन जहाज उनले पश्चिम अफ्रिकी तटको ठूलो भागमा यात्रा गरे। यी यात्राहरूले प्रेरणा पाएको कथाहरू जस्तो जे। हबकूक जेफसनको वक्तव्य (1884) र ध्रुव-सितारा को कप्तान (1890)। १ 1889 XNUMX In मा उनले आफ्नो शोधपत्रको लागि डक्टरेट डिग्री प्राप्त गरे Dorsal ट्याबहरू.
१ 1882२ मा, डोयलले आफ्नो पुरानो कलेजका साथी जर्ज टी। बुडको कार्यालयमा चिकित्साबाट जीविका चलाउन खोज्यो। तर पोर्ट्समाउथ र लन्डनमा उनको पछिल्लो कार्यालयहरू जस्तै यो पहल असफल भयो। तसर्थ, पाठ अधिक बारम्बार सिर्जना गर्न सुरु भयो, सहित, Cloomber रहस्य (1888) y स्कार्लेट मा अध्ययन (१1887), पहिलो तारांकित होम्स।
साथै, क्यानन डोयलसँग आफैँ गल्फ, फुटबल (उनी एक पोर्ट्समाउथ एएफसी गोलकीपर थिए) र क्रिकेट खेल्नमा समर्पित गर्न समय थियो (उनी प्रतिष्ठित मैरीलेबोन सीसीको एक हिस्सा थिए)। अर्कोतर्फ, उनले १1885 देखि लुइस हकिन्ससँग विवाह गरेका थिए जसका साथ उनका दुई बच्चा थिए १ her ०। मा उनको मृत्यु नहोउन्जेल (क्षयरोग) पछि, लेखकको जीन ई लेकीसँगको दोस्रो विवाहमा थप तीन बच्चा थिए।
डोयलको शेरलॉक होम्ससँग प्रेम-घृणाको सम्बन्ध
१1891 XNUMX १ मा आर्थर कानन डोएलले व्यक्त गर्‍यो उनको आमालाई एक पत्र मा que को चरित्र होम्स "आफ्नो दिमागमा लगाएको" थियो। यद्यपि - जासूसको आरोपित मृत्युको बाबजुद, वर्णन गरिएको अन्तिम समस्या-, स्कटिश लेखकले १ 1927 २ until सम्म होम्सको बारेमा कथाहरू जारी गरे (शर्लक होम्स संग्रह)। वास्तवमा, डोले इ publication्ल्याण्डमा त्यो प्रकाशनको three वर्ष पछि जुलाई 7, १ 1930 .० मा मरे।
जे भए पनि, डोयललाई व्यापक कथाहरू र सम्पादकीय सफलताहरू सिर्जना गर्न होम्समा "निर्भर" हुँदैन भनेर देखाईयो। ती मध्ये, प्रोफेसर चल्लेन्जर अभिनीत छ पुस्तकहरु खडा, आफ्नो असंख्य ऐतिहासिक उपन्यास -रडनी स्टोन (१ 1896 XNUMX)), उदाहरण को लागी - र घोषणा पत्र जस्तै बोअरको महान युद्ध (१ 1900 ००) पछिल्लोले एडिनबर्ग लेखकको शीर्षक कमाएको छ महोदय.
Col-कथाहरू पाँच संग्रहमा समूहबद्ध गरी चारवटा उपन्यास तथाकथित होल्मेसियन क्यानन हुन् जुन सर आर्थर कोनन डोयलले बनाएको हो। शेरलक होम्स अभिनीत कथा पढ्न आदेश को लागि, त्यहाँ दुई प्रस्तावित तरिकाहरू छन्।
पहिलोले जासूसको जीवनी जनाउँछ, आफ्नो फिनिटेड निधन र पछाडि देखा पर्नेको लागि एक सुसंगत अनुक्रम सहित। दोस्रो होल्मेसियन क्यानन पुग्ने तरिका es रिलिज समयरेखा अनुसार तल देखाइएको छ (उपन्यासहरूको रूपमा संकेत नभएको शीर्षकहरू कथाहरूको संग्रहसँग मिल्छ):
स्कार्लेट मा अध्ययन (१1887) उपन्यास।
चार को चिन्ह (१1890) उपन्यास।
शर्लक होम्सको एडभेन्चरमेन्ट्स (1892)
शेरलॉक होम्सको सम्झनाहरु (1903)
बास्कर्भिलेको हाउन्ड (1901-1902) उपन्यास।
शर्लक होम्सको फिर्ती (1903)
आतंकको उपत्यका (1914-1916) उपन्यास।
उसको अन्तिम धनु (1917)
शर्लक होम्स संग्रह (1927)
शर्लक होम्स जीवनी
डोलेका लेखोटहरूको दिशा अनुसार, शर्लक होम्स १ 1854 XNUMX मा जन्म भएको थियो. ऊ एक अ land्ग्रेजी जग्गा मालिकको छोरा थियो र एउटी आइमाई गैलिक कलाकारहरूबाट आयो। उनका दुई भाईहरू पनि थिए: शेरिनफोर्ड (सम्पूर्ण होल्मसियन क्याननमा विरलै उल्लेख गरिएको) र माइक्रोफ्ट।
उनले रसायनशास्त्र, चिकित्सा, कानून र संगीतशास्त्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरे केही प्रतिष्ठित बेलायत विश्वविद्यालयमा (डोयलले खास कुन औंला औंल्याउँदैन)। यो विश्वविद्यालयको विद्यार्थीको हैसियतमा ठीक त्यस्तै हो कि होम्सले नाटकीय गतिविधिहरूको साथसाथै आफ्नो जासूस कार्य पनि सुरु गरे।
विश्वविद्यालयमा बसेपछि होम्स ब्रिटिश संग्रहालय नजिकै सरे तपाईको वैज्ञानिक अध्ययनलाई पूरक बनाउन। यसै बीच उनले डा। वाटसनलाई भेटे - जससँग उनले १ twenty1881१ मा सेन्ट बार्थोलोमेभ अस्पतालको प्रयोगशालामा आफ्नो तेईस वर्षको क्यारियरको सत्रह साझेदारी गरे। आफ्नो पक्षका लागि, शेरलकको पार्टनर यसलाई निम्न गुणहरू सहित वर्णन गरियो:
ट्याब्लोइड साहित्य प्रशंसक। यद्यपि उनले कहिलेकाँही गोथे, ला रोचेफाउकड वा जीन पॉल जस्ता लेखकहरूलाई संकेत गरे।
खगोल विज्ञान र दर्शनको बारेमा प्रमाण नल ज्ञानराजनीति र बेलायती कानूनको बारेमा आधारभूत बारे थोरै अन्तरदृष्टि।
उनी रसायनशास्त्रमा विशेषज्ञ थिए र भायोलिन उत्कृष्ट तरिकामा बजाउँथे।
उनीसँग वनस्पतिशास्त्रमा विस्तृत जानकारी रहेको छ (विशेष गरी विष र लागुपदार्थ सम्बन्धी मामिलाहरूमा), यद्यपि उनी कृषि जस्ता विषयहरूमा अनजान थिए।
उनले भूगोल र माटोको संरचनाको बारेमा आधारभूत ज्ञान प्रकट गरे।
विशेषज्ञ मुक्केबाज र फ्यान्सर।
अन्य पात्रहरू र केहि जिज्ञासुहरू
१ th औं शताब्दीको अन्ततिर, होम्सले यसको भिन्नता अस्वीकार गर्‍यो सर (साम्राज्यको नाइट), तर आरक्षित तरिकामा लिजन अफ ऑनर स्वीकार गर्नुभयो। महिलाको रूपमा, जासुसी सधैं उनीहरूप्रति शival्कास्पद थियो शूरता, सम्मान र प्रशंसा को अभिव्यक्ति संग। विशेष गरी आफ्नो प्रिय इरेन एडलर तिर।
असाधारण बौद्धिक क्षमताको एक nemesis
चतुर प्रोफेसर मोरिआर्टी होम्सको नेमेसिस थिए, साथै उनको (स्पष्ट) निधनको कारण पनि थियो। स्विट्जरल्याण्ड, Reichenbach झरना मा। यद्यपि प्रख्यात जासूस तीन वर्ष पछि पुन: देखा पर्‍यो शर्लक होम्सको फिर्ती (१ 1903 ०XNUMX), विशेष रूपमा को मामला मा खाली घर.
आफ्नो खोजी कार्यबाट सेवानिवृत्त पछि, होम्स, इ England्ल्यान्डको ससेक्समा बसाइँ सरे, दर्शन र मौरीपालनको लागि आफूलाई समर्पण गर्न। (उनले एक धेरै विस्तृत माहुरीपालन मार्गनिर्देशन पनि लेखेका थिए।) जे भए पनि, उनीसँग प्रायः संयोगले अर्को महत्वपूर्ण केसलाई सुल्झाउने समय थियो सिंहको मानेको साहसिक (1907)।
अन्ततः, होल्म्सले महायुद्ध सुरु हुने वर्षहरूमा जटिल प्रतिरोध अभियानको योजनामा ​​भाग लियो।। १ 1914 १। पछि साहित्यको इतिहासमा सबैभन्दा प्रख्यात पुलिस अन्वेषकको जीवनको कुनै रेकर्ड छैन (होल्मेसियन क्याननमा)।
जासूसको जीवनी अनुसार होल्मेसियन क्याननको अर्डर पढ्ने
- कर्वेट ग्लोरिया स्कट
- मसग्रेभ अनुष्ठान
- स्कार्लेट मा अध्ययन
- पोल्का डट ब्यान्ड
- निवासी बिरामी
- कुलीन स्नातक
- दोस्रो दाग को साहसी
- बोहेमियामा घोटाला
- मुडिएको ओठ भएको मानिस
- पाँच सुन्तलाको बीज
- पहिचानको एक मामला
- रेडहेड्सको लीग
- मृत्यु जासूस को साहसिक
- निलो कार्बन्कल
- आतंकको उपत्यका
- पहेंलो अनुहार
- ग्रीक दोभाषे
- चार को चिन्ह
- बास्कर्भिलेको हाउन्ड
- कपर बीचेस रहस्य
- बोस्कोन्बे उपत्यका रहस्य
- स्टक ब्रोकरको क्लर्क
- नौसेना सन्धि
- ईन्जिनियरको औंठा
- शिकारी मानिस
- विस्टरिया लज साहसिक
- चाँदी तारा
- बेरील मुकुट
- अन्तिम समस्या
- खाली घर को साहसिक
- गोल्डन चश्मा को साहसिक
- तीन विद्यार्थीको साहसिक
- एकाकी साइकल चालकको साहस
- पिटर "एल नेग्रो" को साहसिक
- नोरवुड निर्माणकर्ता साहसिक
- ब्रुस - पार्टिingtonटन योजनाहरू
- घुम्ती भाडा गर्ने साहसिक
- ससेक्स भेम्पायर साहसिक
- हराइरहेको स्ट्राइकरको साहस
- अबे ग्रान्जको साहसिक कार्य
- शैतानको खुट्टा साहसिक
- कठपुतलीहरुको साहसिक
- सेवानिवृत्त रंग निर्माता
- चार्ल्स अगस्टस मिलवर्टन
- छ नेपोलियनहरूको साहसिक
- थोरको ब्रिज समस्या
- प्राइरी स्कूल को साहसिक
- Shoscombe पुरानो स्थान साहसिक
- तीन ग्यारिडेब्स को साहसिक
- लेडी फ्रान्सेस Carfax बेपत्ता
- Illustrious ग्राहक साहसिक
- रातो सर्कल को साहसिक
- ब्लीच गरिएको छाला सहितको सिपाही
- ट्रेस फ्रन्टनको साहसिक
- मजारिन स्टोनको साहसिक
- मानिस जो क्रल भयो
- सिंहको मानेको साहसिक
- अन्तिम अभिवादन
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » शर्लक होम्स किताबहरु
जुलियो सेसर क्यानो। इन्स्पेक्टर मोन्फोर्टका सिर्जनाकर्तासँग अन्तर्वार्ता